နောက်ထပ် လာဦးမယ့် Battle Royale တွေ – REDPlayer
Battle Royale….. Battle Royale….. Battle Royale… မနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ PUBG နဲ့ Fortnite ကြောင့် နေရာတကာမှာ Battle Royale ကသိပ်ကိုခေတ်စားလာပါတယ်။ ရှိသမျှ ကြီးကြီး သေးသေး game studio တွေအတော်များများက သူတို့ရဲ့ လက်ရှိဂ်ိမ်းတွေမှာ ဒီ game mode ကိုထည့်လာကြသလို၊ တစ်ခြား developer တွေကလည်း Battle Royale အသစ်တွေထုတ်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့ရမှာပါ။ အခုဆိုရင် mod တွေတောင်အတော်များနေပါပြီ။ နောက်ဆုံး Call of Duty နဲ့ Battlefield တို့ဆီရောက်လာတဲ့အထိပေါ့။
ဒါတွေဘယ်တော့ရပ်သွားမယ်ထင်သလဲ…. All good things… ဆိုတာတွေကသိတဲ့အတိုင်းပဲ တစ်ချိန်မှာတော့ ရပ်ရမှာမဟုတ်လား။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ Battle Royale Mode ဆိုတာ အရင်က death match တွေလို ထွက်သမျှ game တိုင်းမှာ standard တစ်ခုဖြစ်သွားမလား.. ဒါမှမဟုတ် တဖြည်းဖြည်းငြီးငွေ့လာပြီးပျောက်သွားနိုင်တာပဲ။
2018 မှာတော့ ထွက်ဖို့ တာစူနေတဲ့ Battle Royale game တွေအများကြိးရှိနေပါသေးတယ်။ အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ တစ်ချို့က လက်ရှိမှာ early-access ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝင်ဆော့လို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Tencent ဆိုတဲ့ ကုမ္ဗဏီနောက်မှာ developer တွေအဖွဲ့လိုက် department လိုက်ကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာ gamer တိုင်းသိပါလိမ့်မယ်။ PUBG mobile နောက်မှာ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ထွက်ရှိလာမယ့် battle royale ဖြစ်ပါတယ်။ trailer အဆိုရင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်က ပစ္စည်းတွေကို ထိခိုက်လို့ရနေပါတယ်။ တစ်ခုပဲ… တရုတ်ပြည်တွင်းပဲဖြစ်မလား၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပေးဆော့မလားတော့မသိဘူးပေါ့။ လောလောဆယ် steam မှာသွားကြည့်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ PC တစ်မျိုးပဲရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Fazan ဆိုတဲ့ studio ကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီး trailer အရတော့ melee-combat ကိုအသားပေးထားပုံရပါတယ်။ ဒီဇိုင်း..ကာလာ.. အနေအထားကတော့ RPG နည်းနည်းဆန်မယ်ထင်ပါတယ်။
ခုရေးထားတဲ့ list ထဲမှာ ဒီဂိမ်းက ကျန်တာတွေဆီကနေဖောက်ထွက်ထားပါတယ်။ သူလည်း early-access ပဲရှိပါသေးတယ်။ အဖွဲ့လိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဦးချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ပင်လယ်ထဲမှာ တည်ထားတဲ့ battle royale ပါပဲ။ သင်္ဘောတွေကတော့ အများကြီးပါ။ NPC သင်္ဘောတွေအပြင် တစ်ခြား ပင်လယ်သတ္တဝါကြီးတွေနဲ့လည်းတိုက်ခိုက်ရဦးမှာပါ။ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ glitch တစ်ချို့တော့ရှိနေပါသေးတယ်။
မကြာခင်က PC အတွက် free-to-play ဖြစ်သွားတဲ့ဂိမ်းပေါ့။ Darwin Project ရဲ့ကြော်ငြာကလန်းတယ်။ ကိုယ်တိုင် Director ဖြစ်ချင်သလားတဲ့။ အရင်တစ်ပတ်က Fortnite ကို streamer တစ်ယောက် အတွက် တစ်ပြိုင်တည်း ကြည့်ရှုသူ ၆သိန်းကျော် သွားတာမှတ်မိဦးမှာပေါ့။ ဒါကိုခြေရာလိုက်နင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Xbox အတွက်ဆော့ချင်ရင်တော့ ဝယ်ရလိမ့်မယ်။
ဒီဂိမ်းကတော့ အငယ်တွေထက်စာရင် အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား gamer တွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ Player 16 ယောက်မှာ open-mic ဖြစ်တဲ့အပြင် audience ရော၊ voting system ရောပါတဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် open-mic ဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ toxic တွေတော့ပါနေဦးမှာ။
Project X ဆိုပြီးအရင်ကသိခဲ့တဲ့သူတွေရှိပါလိမ့်မယ်။ Battle Royale game တွေထဲမှာတော့ သူကရည်မှန်းချက်ကြီးပုံရပါတယ်။ Player အယောက် 400 အထိပါဝင်ကစားလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ မြေပုံက 12kmx12km ရှိမယ်ပြောပါတယ်။ တစ်ခြား တရိစ္ဆာန်တွေပါဝင်လာပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ထိတွေ့ လို့ရမယ်ပြောထားပါတယ်။ အရုပ်တွေက dynamic ဖြစ်မယ်ပေါ့။ ဒါကို support လုပ်ဖို့ SpatialOS cloud tech ကိုသုံးမယ်ပြောထားပါတယ်။ closed beta ကို 2018 နှစ်လယ်လောက်မှာ မြင်ရနိုင်ပါတယ်။ Official website ကိုသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
PALADINS : REALM ROYALE
Hi-Rez ကလွန်ခဲ့တဲ့ January တုန်းက Paladins:Battlegrounds ဆိုပြီး ရောနှောနေရာကနေ အခုတော့ Paladins : Realm Royale ဆိုပြီး Battle Royale သီးသန့်ခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ သူ့မှာ forge zone တွေပါလာတာပါ။ အဲဒီမှာ ကောက်ရလာတဲ့ လက်နက်ပစ္စည်းတွေကို ပိုကောင်းသွားအောင် upgrade လုပ်လို့ရလာပါတယ်။ ဒီတော့ အဲ့ဒီ zone တွေက PvP သမားတွေအတွက်တော့ hot-zone တွေဖြစ်လာနိုင်မှာပေါ့။ အပေါက်ဝထိုင်စောင့်နေတဲ့ ကောင်တွေပေါဦးမှာပေါ့။ Official website ကိုသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို စက်ရုပ်လို့ထင်လာနိုင်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ 5km x 5km ရှိတဲ့ မြေပုံထဲမှာ အားလုံး player 60 လောက်ဝင်ကစားလို့ရပြီး … last robot standing လို့ပြောထားပါတယ်။ Proxima လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာနဲ့သိပ်တူတဲ့ ဂြိုလ်တစ်ခုမှာအခြေခံထားပါတယ်။ လောလောဆယ် closed-alpha တော့လုပ်ပေးနေတာတွေ့ပါတယ်။ open early access တော့ကြာဦးမယ်ထင်တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ March လမှာ Player 45 သန်းကျော်လာပြီးတဲ့နောက် အချိန်မရွေး download လုပ်ပြီးဆော့လို့ရတာကတော့ Fortnite battle royale ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Gamer Cele တွေလည်း streaming လုပ်လို့သိပ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့။ နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ PC, Mac, PS4, Xbox One အပြင် iOS မှာပါရှိနေတာပါ။ ဒီတော့ နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့် Battle Royale တွေကဘယ်လို အသစ်အသစ်သော feature တွေပေးနိုင်မလဲကတော့ early access တွေဝင်ဆော့ရင်း အကြံတွေပေးရင်း ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။
Fortnite official website ကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
Battle Royale….. Battle Royale….. Battle Royale… မနှဈကထှကျခဲ့တဲ့ PUBG နဲ့ Fortnite ကွောငျ့ နရောတကာမှာ Battle Royale ကသိပျကိုခတျေစားလာပါတယျ။ ရှိသမြှ ကွီးကွီး သေးသေး game studio တှအေတျောမြားမြားက သူတို့ရဲ့ လကျရှိဂိမျးတှမှော ဒီ game mode ကိုထညျ့လာကွသလို၊ တဈခွား developer တှကေလညျး Battle Royale အသဈတှထေုတျဖို့ကွိုးစားလာတာတှရေ့မှာပါ။ အခုဆိုရငျ mod တှတေောငျအတျောမြားနပေါပွီ။ နောကျဆုံး Call of Duty နဲ့ Battlefield တို့ဆီရောကျလာတဲ့အထိပေါ့။
ဒါတှဘေယျတော့ရပျသှားမယျထငျသလဲ…. All good things… ဆိုတာတှကေသိတဲ့အတိုငျးပဲ တဈခြိနျမှာတော့ ရပျရမှာမဟုတျလား။ တဈခြိနျခြိနျမှာ Battle Royale Mode ဆိုတာ အရငျက death match တှလေို ထှကျသမြှ game တိုငျးမှာ standard တဈခုဖွဈသှားမလား.. ဒါမှမဟုတျ တဖွညျးဖွညျးငွီးငှလေ့ာပွီးပြောကျသှားနိုငျတာပဲ။
2018 မှာတော့ ထှကျဖို့ တာစူနတေဲ့ Battle Royale game တှအေမြားကွိးရှိနပေါသေးတယျ။ အားလုံးတော့မဟုတျဘူးပေါ့။ တဈခြို့က လကျရှိမှာ early-access ဖွဈတဲ့အတှကျ ဝငျဆော့လို့ရနိုငျပါလိမျ့မယျ။
Tencent ဆိုတဲ့ ကုမ်ဗဏီနောကျမှာ developer တှအေဖှဲ့လိုကျ department လိုကျကွီးရှိနတေယျဆိုတာ gamer တိုငျးသိပါလိမျ့မယျ။ PUBG mobile နောကျမှာ သူ့ရဲ့ကိုယျပိုငျ ထှကျရှိလာမယျ့ battle royale ဖွဈပါတယျ။ trailer အဆိုရငျတော့ ပတျဝနျးကငျြက ပစ်စညျးတှကေို ထိခိုကျလို့ရနပေါတယျ။ တဈခုပဲ… တရုတျပွညျတှငျးပဲဖွဈမလား၊ တဈကမ်ဘာလုံးကိုပေးဆော့မလားတော့မသိဘူးပေါ့။ လောလောဆယျ steam မှာသှားကွညျ့လို့ရပါလိမျ့မယျ။ PC တဈမြိုးပဲရနိုငျပါလိမျ့မယျ။
Fazan ဆိုတဲ့ studio ကထုတျလုပျတာဖွဈပွီး trailer အရတော့ melee-combat ကိုအသားပေးထားပုံရပါတယျ။ ဒီဇိုငျး..ကာလာ.. အနအေထားကတော့ RPG နညျးနညျးဆနျမယျထငျပါတယျ။
ခုရေးထားတဲ့ list ထဲမှာ ဒီဂိမျးက ကနျြတာတှဆေီကနဖေောကျထှကျထားပါတယျ။ သူလညျး early-access yဲရှိပါသေးတယျ။ အဖှဲ့လိုကျပဲဖွဈဖွဈ တဈဦးခငျြးပဲဖွဈဖွဈ ပငျလယျထဲမှာ တညျထားတဲ့ battle royale ပါပဲ။ သင်ျဘောတှကေတော့ အမြားကွီးပါ။ NPC သင်ျဘောတှအေပွငျ တဈခွား ပငျလယျသတ်တဝါကွီးတှနေဲ့လညျးတိုကျခိုကျရဦးမှာပါ။ ပြျောဖို့ကောငျးပါတယျ။ glitch တဈခြို့တော့ရှိနပေါသေးတယျ။
မကွာခငျက PC အတှကျ free-to-play ဖွဈသှားတဲ့ဂိမျးပေါ့။ Darwin Project ရဲ့ကွျောငွာကလနျးတယျ။ ကိုယျတိုငျ Director ဖွဈခငျြသလားတဲ့။ အရငျတဈပတျက Fortnite ကို streamer တဈယောကျ အတှကျ တဈပွိုငျတညျး ကွညျ့ရှုသူ ၆သိနျးကြျော သှားတာမှတျမိဦးမှာပေါ့။ ဒါကိုခွရောလိုကျနငျးတယျလို့ထငျပါတယျ။ Xbox အတှကျဆော့ခငျြရငျတော့ ဝယျရလိမျ့မယျ။
ဒီဂိမျးကတော့ အငယျတှထေကျစာရငျ အတှအေ့ကွုံရှိပွီးသား gamer တှအေတှကျပိုအဆငျပွမေယျထငျတယျ။ Player 16 ယောကျမှာ open-mic ဖွဈတဲ့အပွငျ audience ရော၊ voting system ရောပါတဲ့အတှကျ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတယျ။ ဒါပမေယျ့ open-mic ဆိုတော့ သိတဲ့အတိုငျးပဲ toxic တှတေော့ပါနဦေးမှာ။
Project X ဆိုပွီးအရငျကသိခဲ့တဲ့သူတှရှေိပါလိမျ့မယျ။ Battle Royale game တှထေဲမှာတော့ သူကရညျမှနျးခကျြကွီးပုံရပါတယျ။ Player အယောကျ 400 အထိပါဝငျကစားလို့ရမှာဖွဈပွီးတော့ မွပေုံက 12kmx12km ရှိမယျပွောပါတယျ။ တဈခွား တရိစ်ဆာနျတှပေါဝငျလာပွီးတော့ ပတျဝနျးကငျြကိုလညျး ထိတှေ့ လို့ရမယျပွောထားပါတယျ။ အရုပျတှကေ dynamic ဖွဈမယျပေါ့။ ဒါကို support လုပျဖို့ SpatialOS cloud tech ကိုသုံးမယျပွောထားပါတယျ။ closed beta ကို 2018 နှဈလယျလောကျမှာ မွငျရနိုငျပါတယျ။ Official website ကိုသှားကွညျ့နိုငျပါတယျ။
Hi-Rez ကလှနျခဲ့တဲ့ January တုနျးက Paladins:Battlegrounds ဆိုပွီး ရောနှောနရောကနေ အခုတော့ Paladins : Realm Royale ဆိုပွီး Battle Royale သီးသနျ့ခှဲထုတျလိုကျပါတယျ။ ဘာကှာသှားလဲဆိုတော့ သူ့မှာ forge zone တှပေါလာတာပါ။ အဲဒီမှာ ကောကျရလာတဲ့ လကျနကျပစ်စညျးတှကေို ပိုကောငျးသှားအောငျ upgrade လုပျလို့ရလာပါတယျ။ ဒီတော့ အဲ့ဒီ zone တှကေ PvP သမားတှအေတှကျတော့ hot-zone တှဖွေဈလာနိုငျမှာပေါ့။ အပေါကျဝထိုငျစောငျ့နတေဲ့ ကောငျတှပေေါဦးမှာပေါ့။ Official website ကိုသှားကွညျ့နိုငျပါတယျ။
ကိုယျ့ကိုယျကို စကျရုပျလို့ထငျလာနိုငျတဲ့ဂိမျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ 5km x 5km ရှိတဲ့ မွပေုံထဲမှာ အားလုံး player 60 လောကျဝငျကစားလို့ရပွီး … last robot standing လို့ပွောထားပါတယျ။ Proxima လို့ချေါတဲ့ ကမ်ဘာနဲ့သိပျတူတဲ့ ဂွိုလျတဈခုမှာအခွခေံထားပါတယျ။ လောလောဆယျ closed-alpha တော့လုပျပေးနတောတှပေ့ါတယျ။ open early access တော့ကွာဦးမယျထငျတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ March လမှာ Player 45 သနျးကြျောလာပွီးတဲ့နောကျ အခြိနျမရှေး download လုပျပွီးဆော့လို့ရတာကတော့ Fortnite battle royale ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ Gamer Cele တှလေညျး streaming လုပျလို့သိပျကောငျးနတေဲ့အခြိနျပေါ့။ နောကျထပျတဈခကျြကတော့ PC, Mac, PS4, Xbox One အပွငျ iOS မှာပါရှိနတောပါ။ ဒီတော့ နောကျထပျထှကျလာမယျ့ Battle Royale တှကေဘယျလို အသဈအသဈသော feature တှပေေးနိုငျမလဲကတော့ early access တှဝေငျဆော့ရငျး အကွံတှပေေးရငျး ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ကွတာပေါ့ဗြာ။
Fortnite official website ကိုသှားနိုငျပါတယျ။
Tags battle-royale Fortnite PUBG